Akụkọ - Sercel Ma Tronic's Team Up Maka MEMS Dabere Geophones
Sercel na TRONIC'S Microsystems, ejikọtara ọnụ maka imepụta ọhụụ nke ihe mmetụta seismic, ma ọ bụ geophones, dabere na MEMS. Ejiri CEA Leti mee ihe, 0.1µg mkpebi accelerometer akpọrọ n'okpuru agụụ enweela nke ọma site na TRONIC'S Microsystems.
Geophones nwere otu n'ime ngwaahịa bụ isi nke Sercel (F), onye isi ụwa na ngwa seismic maka nyocha mmanụ na gas. Ihe mmetụta sensọ dị oke egwu, ndị geophones na-atụgharị uche nke ebili mmiri na-atọ ụtọ, zitere n'elu ala ahụ, na mpaghara geologic dị iche iche (lee ọgụgụ 1). A na-ejizi data ahụ adọta map nyocha ala nke na-egosi ebe na ogo mmanụ dị na gas.
Geophones, ọ bụ ezie na ọ bụ ego eletriki na-adịghị ọnụ (lee nọmba 2), ọ dịla arọ ma na-agwụ ike ka ha kwesịrị iji eriri jikọọ ya na ngalaba nhazi ọrụ. Nchọpụta mmanụ nke oge a na-achọ ka ọ dịwanye mfe, azịza ndị ọzọ na-agagharị agagharị nke nwere oke nkenke.
MEMS dabere na geophone
Sercel nọrọ ọtụtụ afọ rụọ ọrụ na CEA Leti (F), iji gosipụta ma ọ nwere ike ịmepụta ma jupụta geophone nke MEMS. Mmekọrịta ahụ rụpụtara ihe ngosipụta nke geophone dị egwu na nke na-ebuwanye ibu (lee ọgụgụ 2 na tebụl 1).
Ihe ngosi a ruru ihe ngosi dị oke mkpa achọrọ: mkpebi ruo 0.1µg, ihe na-erughị otu nde nde nke ike ndọda overwa, karịa ọtụtụ +/- 100mg.
Agbanyeghị, otu n'ime nsogbu kachasị esetịpụrụ ibugharị usoro MEMS sitere na ụlọ nyocha na usoro mmepụta. MEMS n’ezie enweghị usoro nrụpụta ọkọlọtọ ma nwee nnukwu ihe nkwakọ ngwaahịa na usoro nyocha dị mgbagwoju anya. Ya mere, Sercel chọrọ onye nrụpụta MEMS omenala nke nwere ike ịgbanwe echiche MEMS ya na ngwaahịa mmepụta ihe a pụrụ ịdabere na ya.
Geophone ụlọ ọrụ mmepụta ihe
N'ịbụ onye nwere ahụmịhe nke MEMS accelerometers nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na imepụta ihe, TRONIC'S Microsystems (F) mụtakwara ihe owuwu nke teknụzụ geophone Sercel.
Mdị azụmaahịa MEMS n'ichepụta azụmaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ dabara adaba maka mkpa nrụpụta Sercel. Ya mere ụlọ ọrụ abụọ ahụ banyere na mmekọrịta azụmahịa
Malite na prototypes, Tronic kachasị nke ngwaọrụ ma ruo eruo usoro a kapịrị ọnụ yana usoro nkwakọ ngwaahịa agụụ. Onye nrụpụta France wee hụ izipu usoro izizi na mbido 2003 ma taa na-anapụta ngwungwu ma nwalere geophone (lee ihe ngosi 3) nke Sercel jikọtara na sistemụ dijitalụ ọhụrụ.
Agụụ ngwugwu maka MEMS
Iji belata mkpọtụ akwara na ngwongwo ahụ na iru ọkwa dị mkpa, TRONIC'S na-ekpuchi microstructure silicon n'okpuru nnukwu ọnọdụ agụụ na nkwakọ ngwaahịa LCC. Ihe nkwakọ ngwaahịa a na-enye Mops geophone MEM karịrị ihe Q nke karịrị 10.000 (oghere echere na nso nke 1mTorr).
Nta na mpe mpe akwa MEMS geophone kpochapụrụ ọbụna karịa ụfọdụ nkọwa nkọwa ndị ọzọ nke geophones ọdịnala (lee okpokoro 1).
Na mgbakwunye, enwere ike itinye geophones 3 MEMS n'ime obere oghere na igwe eletriki ya dijitalụ na-ewepu ụfọdụ eriri ndị achọrọ na mbụ. Ihe omumu ohuru nke MEMS nke dabere na ime ka ndi oru Sercel na-eme ka ndi mmadu nweta udiri ihe ndi mmadu na-acho ka ha mejuputa 3.
Site na mmekota a, TRONIC'S Microsystems egosilawanye ikike ya ịgbanwe echiche MEMS omenala ka ọ bụrụ ngwaahịa arụmọrụ dabara adaba maka ngwa ngwa.